Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguAna Adela
Iikhabhini kwindawo egqibeleleyo yokubalekela isixeko. Ikhabhathi nganye ilungisiwe ukuze ukwazi ukuphila amava angcono kakhulu ehlathini. Ukusuka ekuhambeni ecaleni komlambo ukuya kwi-bonfires nakwi-barbecue, amava oya kuhlala e-Rancho Los Barriles aya kuba yinto engalibalekiyo; siya kuba sesandleni sakho ngamaxesha onke. Ukungena kunye nokuphuma kubhetyebhetye ngokupheleleyo.
Iikhabhini zenziwe ngokukhethekileyo ukunika ubumfihlo, ngamnye unegumbi lokuhlambela eligcweleyo elinamanzi ashushu. Ibhedi yobukhulu bokumkanikazi enezixhobo eziphezulu zokuqinisekisa ukuphumla kobusuku obuhle. Xa uvuka unokonwabela isidlo sakusasa sekofu, iziqhamo kunye nesonka esisuka kwingingqi yelizwekazi, esiya kukusa kwikhabhinethi yakho kusasa.
4.77 · Izimvo eziyi-47
I-Rancho Los Barriles ibekwe ekungeneni kwedolophu entle yase-Acaxochitlán, indawo yayo isebenza kakhulu kuba ingaphantsi kwe-1 km kumbindi wedolophu apho kukho imarike yeentakumba rhoqo ngeCawe. Kwi-400 m uya kufumana i-Oxxo kunye nevenkile yokutyela edumileyo yaseLa Lupita ebonelela ngokutya okuqhelekileyo ngexabiso elifanelekileyo kwaye unokufumana ezona skis zibalaseleyo. Kwi-Acaxochitlán ungafumana iindawo ezahlukeneyo zemilingo, ezinjengendawo yokubhaka enamakhulu eminyaka yembali, iingxangxasi ezintle kakhulu, iicawa ezithandwa kakhulu. Idolophu intle kakhulu kwaye iyafikeleleka, kuyo yonke indawo uya kufumana izinto onokuzibona kwaye uzonwabele.
Umbuki zindwendwe ngu- Ana Adela
Banokunxibelelana nathi ngesicelo. UNkskz. Juanita uya kukunika inombolo yakhe yefowuni ngayo nayiphi na inkonzo oyifunayo.